Kuyinto imfihlo ukuthi kukhethwa iwuhlelo Smartphones kuyindaba kunalokho zokunambitha a. Kodwa ifoni isabelomali, kunalokho akhetha ukukwenza ngokuphila kwakhe, kuba lalivamile, kodwa akukho msebenzi ezingabalulekile kangako, okuyinto kufanele wasondela sina kakhulu. Kungani-ke uma ukhetha idivaysi alesi sigaba kuyadingeka ukuze uhlaziye imininingwane emincane? Yini Ngibheka lapho ukhetha idivaysi? Lapha, mhlawumbe, ukuthi ukukhetha ifoni ibhajethi, sizobe ukukhuluma namuhla.
Umgomo we ekilasini isabelomali
Mhlawumbe, namuhla mobile emakethe ifoni niche kungenziwa ngokuthi eziphambili kakhulu. Nanguya njalo kunyakaza. Kunabantu abangazange bacabange ukuthi usuku nosuku isimo kwamanani amadivayisi ephansi ekupheleni waqinisa emakethe kuphela. Empeleni, konke lokhu kungabi njalo. Asikho isidingo ube udokotela wesayensi yezomnotho, ukuze uqonde ukuthi lo mshini ezifanele.
Bona: Okwamanje emakethe kukhona lenqwaba izinkampani, ngamunye enikeza isamba esikhulu isabelomali Smartphones. Ngokwemvelo, wonke umuntu ufuna ukuba uthole inzuzo. Kodwa ingabe kuyoba nomuzwa yokuthengisa, uma inkampani yokuncintisana ubeka umkhiqizo ngokuphelele ezifanayo ngentengo ephansi? Lapha-ke sifika esiphethweni elula ukuthi isabelo sezimali niche market ungqimba lapho umncintiswano unamandla kakhulu. Lokhu kusho ukuthi Ukwanda okuphawulekayo kokuthandwa intengo, okuyinto hit ekhukhwini umthengi abavamile esikhathini esizayo esiseduze is akulindelekile.
Kuyini nobuntu zinsizakuphila?
Ibhajethi omakhalekhukhwini anezici ezithile ukuthi ahlukile kubo. Umsebenzisi ngamunye efuna ukuthenga kudivayisi ngenxa yaleli niche has ukuqonda ukuthi choice ngeke kube lula, kungakhathaliseki ukuthi aba namuphi abamakethi nabathengisi. Ngokombono wabo, iyiphi i-smartphone (kuhlanganise ikilasi ibhajethi) uyisibonelo esihle kanjani imfanelo edingekayo ukukhiqiza kumadivayisi eselula. Kodwa-ke konke ibhizinisi, futhi-ke, idivayisi ezishibhile akunakwenzeka ukujabulisa ukusebenza okuhle kanye nekhamera izinga. Uma sikhuluma amaphutha esithile, isibonelo, mhlawumbe, isofthiwe engaphelele, esenza akuhileli yiqhwa gqwa. Uma ungeyena wayezimisele ukubekezelela kubo, futhi badinga idivayisi azosebenza ngokushesha hhayi kuphela wenze njalo nawe, njalo, kungcono ujike amehlo ethu umfuziselo ezibizayo.
Thenga imodeli ubudala noma cha?
Akuwona wonke umuntu bathandile ukuthenga iyunithi, eye wahlala esikhathini esidlule, umkhakha lobuchwepheshe. Yiqiniso, izimfanelo kungase kungabi kubi kangako, ne imisebenzi ewubala nje smartphone kalula ukubhekana. Kodwa uyini ukuntuleka kwako kuyoba kuleli cala, uma kuqhathaniswa idivayisi kancane ezibizayo, kodwa futhi ngaphezulu "fresh"? Okokuqala, icala isofthiwe nezimfuno zayo esande hardware kanye namasistimu okusebenza.
On the inapplicability abadala wokusebenza
umshini Old esekelwe "Android", uthi 2.3, awukwazi ukusebenzisa ukusebenza izinhlelo ezintsha kanye imidlalo. Okwesibili, ngisho imisebenzi elula we plan ubudala idivayisi ongaxazulula, kodwa anelise ngokugcwele izidingo umsebenzisi isilinganiso isikhathi sethu - akukho. Thina zijwayele ukuba zitshele kusuka Smartphones ngaphezulu. Manje ezingavamile ukuthola abantu baphendule ngokuthi "Ngidinga ifoni kumakholi" a ngokwethembeka ngempela. Futhi by the way, uma unquma ukuthenga umshini owawukade esetshenziswa indoda, cabanga yokuthi ingase kancane ibhethri ehlatshwa. Ingabe udinga idivayisi esebenza amahora 2-3 kwamandla? Asinakukwenza lokho.
Sha akuyona inkomba yokuthi ukusebenza
Akunjalo kudala bonke babekholelwa ukuthi okungcono isabelomali ifoni senziwa yinkampani South Korean "Samsung". Nokho, njengoba isikhathi sasihamba emakethe olunikezwe yi ezingasho onobuhle ezintsha kwakuqala ukwanda kanye nezinye brand. Futhi manje, ekugcineni, kwaba sobala ukuthi sha akuyona isiqinisekiso okuphelele umshini okusezingeni eliphezulu ukusebenza. Ngokwesibonelo, cabangela izinkondlo, "The best isabelomali ifoni njengoba ka 2015" (isihloko uhlobo ikakhulukazi izingcaphuno, ngoba Kwatholakala ukuthi akuhambisani nalesiprofetho imodeli) - "Samsung Galaxy Advance". Ima ruble Russian wawo kungathi izinkulungwame eziyisihlanu. Kodwa lokhu akulona ibhajethi ifoni ikhamera ezinhle, kodwa ukuhlupheka samanje, engesiyo kuwufanele imali. Ngokuvamile, baseKorea ezikhathini zamuva akuzona Inqubomgomo impela kucacile. Yiqiniso, ababusi kudivayisi "A" zenziwa ngokwanele zwí. Noma kunjalo, intengo badayisa lapho kuthiwa overstated ngokucacile. Futhi isizathu kuphela ukuthi - sha kanye inkazimulo "Samsung" iwine emakethe smartphone. mncintiswano Serious kule yunithi (cishe intengo kuhlobo olufanayo) ezakha amadivayisi kusukela izinkampani ezifana LG futhi Sony.
Ingabe kukhona ukuxhumana phakathi ezingeni 'nensimbi' futhi Ukusebenziseka?
ifoni Ibhajethi ngekhamera ezinhle ingatholakala ruble ayizigidi eziyishumi Russian. Kodwa umdlalo silo ngentengo efanayo ngeke ukuthole kwenye indawo. Yebo apparatuses ezifana, isibonelo, Asus Zenfone 2 noma Microsoft Lumia 640 uyakwazi ngaphandle amabhuleki eqinile uxhumana amathoyizi, okuyinto ileveli ezingeni "ngenhla avareji". Kodwa ukuqinisekisa ngokugcwele operation esitebeleni ngalesi sikhathi, noma ukuvumela umsebenzisi ukudlala isicelo nge izinkanyezi ezinhlanu, cishe ngeke. It kuvela ukuthi iselula isabelomali efana uhlobo computer esikoleni (okuyinto wathenga le nhloso futhi hhayi ikhava). Ngakho-ke, onjiniyela abalwa zonke penny, ukukhulisa ukonga kwi "hardware" amadivayisi abo. Futhi ngandlela-thile isinxephezelo amaphutha, baqhuba ukuhlolwa eyengeziwe futhi sithuthukise isofthiwe. It kuvela ukuthi "hardware" Eqinisweni buthaka, futhi uhlelo ukusebenza zisala ezinhle, singasho ezingaphezu kuka ezingeni elemukelekile. amafoni Ibhajethi, amanani awo iwe esezingeni 5 izinkulungwane 15 ruble Russian, okophula Kujabulisa ngempela ukusebenza software standard, igxile imisebenzi yansuku zonke.
ngabe isibonisi kubalulekile, futhi kahle indlela kungaba ngesikhathi umsebenzi isimo?
Ecinga izici ukuthenga kwako, isibonelo, kwezinye website inthanethi esitolo, ungakwazi siyakhubeka ku igrafu ku incazelo isibonisi kudivayisi. Sici Its main Yebo, matrix. Asikho isidingo ukuba ube uchwepheshe, nje ukukhumbula memo elandelayo. Uma matrix of IPS, kukuhle kakade. Ngisho kangcono, uma kuyintando Super AMOLED. Kodwa uma ku matrix alisho lutho, kungenzeka ukuthi ngaphakathi ingxenye uhlobo TN. Ngomfanekiso wakhe ngokushesha iba uhlanekezelwe ngokushesha ngangokunokwenzeka ukususa isihenqo ngolayini ifihlekile. IPS nakho kungaba ezahlukene. Noma kunjalo, lona kanye iqiniso khona lisikisela ukuthi matrix singabantwana asisona esingenathemba.
Kungenzeka yini ukuba uthole ngendlela abasebenzi esimweni esejwayelekile 'nensimbi'?
Lo mbuzo, yebo, nentshisekelo inani elikhulu abasebenzisi, khulukhulu abantu abatjha. ngokusobala Badinga iselula, hhayi kuphela yamakholi imiyalezo. Lihlanganisa futhi "imibuthano" in the jikelele umdlalo, ukusetshenziswa software uhlelo third-party amathuluzi, amakhamera kanye nezinye izingxenye. Futhi konke lokhu kungenziwa kuphela ngezithukuthuku 'nensimbi' ezingeni elifanele, njengoba isofthiwe, thina kule ndawo kahle, ngokusobala Imiphumela umxhwele sifeze. Uma ufuna ukuba nesibhamu abasebenzi isimo enamandla (kuqhathaniswa izimbangi zayo abaseduze, yebo, hhayi idivayisi iwuhlelo), khona-ke unake imikhiqizo senkampani Fly. Eminyakeni yamuva phezu kumadivayisi ukulethwa eRussia igxile igebe isabelomali, ngakho kwasekuqaleni kufanele izimoto lokhu ngokuqinile zihlolwe.
Ukukalwa isabelomali amafoni
Nakanjani ngeke sithi iyiphi inkampani unasiphi isikhundla e uhlobo hit umbukiso. kuba lula kangakanani kunjalo, uma sibheka ezinye zindlela. Ngokwesibonelo, uma ufuna idivayisi nge isibonisi eliphezulu nebhethri ezinhle (kanye namadivayisi ngezimiso ezinjalo ngokuvamile ukuthenga eBook umfundi abalandeli), ngayo Fly Inkampani. Uma ufuna smartphone enamandla imali elinganiselwe, kufanele cishe ngiphendukele inkampani Asus. Nokho, ibhizinisi abathandi ifoni ungathanda Yiqiniso, umkhiqizo "Microsoft" egijima kwi-Windows platform Ucingo.
Schönefeld Isikhumulo sezindiza: indlela ukuze uthole uhlelo kanye nokubuyekeza
Yini ecasula amadoda e amadoda kakhulu?
Inganekwane Minotaur: imininingwane kanye nokuqukethwe